Donald Trump oo noqday madaxweynaha 45-aad ee Maraykanka - BBC News Somali
Donald Trump oo noqday madaxweynaha 45-aad ee Maraykanka
7 Nov 2016 00:007 Nov 2016 00:00
Trump ayaa noqday madaxweynihii 45-aad ee Maraykanka
Trump ayaa 538 cod ee gobolada dalka ka helay 278, waxa uuna u baahnaa in uu helo oo kaliya 270 si uu u guuleysto.
Guushiisa ayaa waxa u sahlay codadka uu ka helay gobolada Florida, Ohio iyo North Carolina.
Trump ayaa dadka Mareykanka u sheegay in la joogo wakhtigii ay midoobi lahaayeen.
Daawo: Donald Trump hadaladiisi ugu horreeyay kaddib markii loo doortay Madaxweynaha dalka Mareykanka.
Posted at 13:29 9 Nov 2016
Trump oo laga soo dhaweeyay bariga dhexe
Inta badan madaxda waddamda ku yaala bariga dhexe ayaa soo dhaweeyay guusha Trump uu ka soo hooyay doorashadii Mareykanka.
Madaxweynaha Iran, Xasan Rowxaani, waxa uu sheegay in aan marnaba laga laaban karin heshiiskii dhanka Niyuukleerka ee uu dalkiisa la galay quwadaha caalamka.
Trump ayaa horey u sheegay in heshiiskaasi uu ahaa heshiiskii ugu xumaa ee soo mara taariikhda Mareykanka.
Rowxaani waxa uu sheegay in golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey uu ansixiyay heshiiskaasi, sidaa awgeedna hal waddan uusan waxbo baddali karin.
Boqorka Sucuudiga boqor Salmaan ayaa u rajeeyay Trump in uu ku guuleysto amniga iyo xasilinta bariga dhexe.
Ra’iisalwasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa Trump ku tilmaamay saaxibka dhabta ah ee Israa’iil.
Madaxweynaha Iran, Xasan Rowxaani
Obama oo u hambalyeeyay Trump
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa taleefoon kula hadlay madaxweynaha la doortay ee Donald Trump si uu ugu hambalyeeyo guushiisa.
Obama ayaa Trump ku casumay aqalka cad ee mareykanka looga arrimiyo, halkaa oo ay ku kulmi doonaan berri oo khamiis ah.
Kulankooda ayaa waxa ay uga wada hadli doonaan kala guurka uu dalka galayo.
Madaxweyne Obama ayaa sidoo kale taleefoon kula hadlay Hillary Clinton, waxa uuna ugu hambalyeeyay dedaalkeeda ololaha doorashada.
Obama ayaa maanta oo arbaca ah waxa uu ka hadli doonaa natiijada doorashada iyo in dadka la mideeyo maadaama lagu kala qaybsanay ololaha doorashada.
Posted at 11:43 9 Nov 2016
Soomaaliya oo u hambalyaysay Trump
Dowladda Soomaaliya ayaa u hambalyaysay madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay la shaqeyn doonto madaxweynaha la doortay.
Waxa uu intaasi ku daray in Mareykanka uu Soomaaliya gacan ka siinayay la dagaalanka argagixisada, ayna rajaynayaan wali in ay arrimahaasi iska kaashan doonaan.
Hadliye waxa uu sheegay in go’aanka Trump lagu soo doortay uu ahaa mid ka yimid dad weynaha Mareykanka, sidaa awgeed ay soo dhaweynayaan isla markaana la shaqaynayaan madaxweynaha la doortay.
Haseyeeshee Hadliye waxa uu walaac ka muujiyay hadal dhawaan ka soo yeeray Trump oo ahaa in qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool Minnesota ay gaystaan dhibaatooyin ku salaysan xagjirnimo, waxa uuna sheegay in aysan habboonayn in mas’uul uu hadalkaasi ka soo yeero.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Posted at 10:25 9 Nov 2016
Theresa May oo u hambalyaysay Trump, ballan qaadayna xiriir gaar ah.
Ra’iisalwasaaraha Theresa May ayaa u hambalyaysay Donald Trump guusha uu ka gaaray doorashada. Warbixin qoraal ah oo ay soo saartay ayay ku tiri:
“Waxaan jeclaan lahaa in aan u hambalyeeyo Donald Trump, doorashada loo doortay in uu noqdo madaxweynaha xiga ee Mareykanka kaddib olole aad loogu loolamay.
Britain iyo Mareykanka ayaa waxa ay lahaayeen xiriir gaar ah oo ku dhisan mabaa’dii ku saleysan xorriyad, dimuquraadiyad iyo horumar dhaqaale.
Waxaa naga dhaxeeyay haddana naga dhaxayn doono iskaashi dhow oo ku saabsan ganacsiga, ammaanka iyo gaashaandhigga.
Waxaan rajeynayaa in aan kala shaqeyn doono madaxweynaha la doortay ee Donald Trump, sidii aan u xoojin la hayn arrimahaasi, si aan u xaqiijinno ammaanka iyo horumarka waddamadeena sanaddada soo socda."
Posted at 10:06 9 Nov 2016
Yaa u hambalyeeyay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka?
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Trump u diray dhambaal uu ugu hambalyaynayo, waxa uuna sheegay in uu rajaynayo in ay ka wada shaqayn doonaan sidii loo wanaajin lahaa xiriirka Mareykanka iyo Ruushka.
Madaxda Midowga Yurub ee kala ah Donald Tusk iyo Claude Juncker ayaa iyaguna Trump u diray hambalyo kal iyo laab ah, waxa ayna ku casumeen in uu soo booqdo Yurub.
Madaxweynaha Masar Cabdifataax Al-Siisi ayaa shaqo wanaagsan u rajeeyay Trump, waxa uuna sheegay in uu rajeynayo in uu dib u soo noolayn doono xiriirka ka dhaxeeya labadooda dal.
Madaxweynaha Falastiyiniinta Maxamuud Cabbaas ayaa warbixin qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in uu u hambalyaynayo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, isla markaana uu rajeynayo in nabad la gaari doono muddada uu xilka hayo.
Ra’iisalwasaaraha dalka India Narendra Modi waxa uu dhankiisa sheegay in uu rajeynayo in uu si dhow ula shaqeeyo Donald Trump, si heer kale loo gaarsiiyo xiriirka labo geesoodka ah ee u dahxeeya waddamada Mareykanka iyo India.
Lu Kang oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in ay rajaynayaan in ay si wanaagsan ula shaqeeyaan maamulka cusub ee Mareykanka si loo sii dhiirigeliyo xiriirka u dhaxeeya labadooda dal, balse marna ma uusan sheegin magaca Trump.
Obama cafis ma u fidin doonaa Hillary Clinton, ka hor inta uusan xilka ka degin
Goobaha ay ku dabbaaldegayaan taageerayaasha Trump ayaa waxaa laga maqlayaa iyaga oo leh Hillary waa in xabsiga la dhigaa.
Trump ayaa xilligii ololaha doorashada ballan qaaday in uu magacaabi doono dacwad ooge khaas ah oo baaritaan ku sameeyo Hillary, sababo la xiriira isticmaalka Email-keeda khaaska xilligii ay ahayd xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Dhawr jeer ooh ore ayuuna sheegay in Hillary ay xabsi ku muteysan doonto arrintaasi.
Waxa ay u muuqataa in aysan dhici doonin in Hillary arrintan siyaasad ahaan lagu beegsado basle dadka qaar ayaa muujiyay suurtagalnimada Obama oo dayaca Hillary Clinton ka hor inta uusan xilka ka deign.
Posted at 9:18 9 Nov 2016
Turkiga oo Trump u hambalyeeyay, dalbadayna in uu u soo gacan geliyo Fatxullah Gulen.
Ra’iisalwasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa ugu baaqay Donald Trump in uu Turkiga u soo gacan geliyo wadaadka Fatxullah Guleh oo xukuumadda Ankara ay ku eedeysay in uu soo abaabulay inqilaabkii fashilmay ee ka dhacay dalkaasi Turkiga.
Posted at 8:31 9 Nov 2016
Daawo: Soomaalida Mombasa oo ka hadashay guusha Trump
Posted at 8:24 9 Nov 2016
Trump: Mudnaanta waxaan siin doonaa Maraykanka
"Waxaan rajaynayaa inaan xiriir wanaagsan la yeesho waddamada kale ee caalamka", ayuu yiri Trump
Maraykanka wax aan wanaag ahayn oo deeqaya ma lahan
"Mar kasta danaha Maraykanka ayaan mudnaan siin doonaa"
Posted at 7:46 9 Nov 2016
Donald Trump ayaa ku guuleystay doorashada Marykanka
Posted at 7:26 9 Nov 2016
War deg deg ahTrump oo gaaray goobtii lagu qaban lahaa 'debbaaldega'
CNN ayaa ku warrantay in Donald Trump uu gaaray hoteelka Hilton oo ay taagerayaashiisa isugu yimideen.
Posted at 7:24 9 Nov 2016
War deg deg ahCodadkii gobolka Maine waa la kala qeybsaday
Saadaal ay sameysay ABC ayaa lagu sheegay in seddax ka mid ah codadkii ergada gobolka Maine ay heshay Clinton
Trump hal cod ayuu gobolkaasi ka helay
Posted at 7:21 9 Nov 2016
Hillary Clinton ma hadli doonto Caawo
Madaxa kooxda ololaha Hilllary Clinton ayaa taagerayaasha Clinton u sheegay inay iska galbadaan maadama aysan caawa hadli doonin.
Posted at 6:31 9 Nov 2016
Diyraagrowga 'dabbaaldega' Trump
Donald Trump ayaa ka tagay dhismihiisa Trump tower oo waxa uu dhaqaaqay dhinaca hotelka Hilton halkaasi oo la sheegay in lagu qaban doono xafladda dabaaldegga hadii uu Trump guuleysto.
Posted at 5:25 9 Nov 2016
Yaab ka soo haray taageerayaasha Clinton
Taageerayaasha Hillary Clinton ayaa aad ula yaaban guulaha uu Donald Trump ka helay qaar ka mid ah gobollada lagu kala baxo.
Posted at 5:13 9 Nov 2016
Daawo Soomaalida Maraykanka oo ka faaloonaya doorashada
Posted at 4:54 9 Nov 2016
Clinton "fursad keliya ayay ku guulaysan kartaa"
Norm Ornstein ayaa BBC-da u sheegay in fursadda keli ah ee Hillary Clinton ay guusha ku hanan kartaa tahay in ay ku guulaysato gobollada Pennsylvania, Michigan iyo Winsconsin, waana dariiqa keli ah ee ay Aqalka Cad u mari karto.
"Iyada jidkaas uun baa u furan, isagu se fursado badan buu haystaa" ayuu hadalka ku sii daray.
Posted at 4:48 9 Nov 2016
Clinton ayaa ku guuleysatay gobolka Washington
Gobolka Washington ayaa u codeynayay xisbiga Dimuqraadiga tan iyo 1988. Marka in Clinton ay ku guulesato arrin yaab leh ma ahan
Posted at 4:42 9 Nov 2016
War deg deg ahTrump oo ku guuleystay gobolka muhiimka ah ee Florida
ABC News ayaa saadaalineyso in Donald Trump uu ku guuleystay gobolka Florida.
Posted at 4:07 9 Nov 2016
Halkan si toos ah uga dhageyso idaacadda Suabxnimo oo gabi ahaanteedba aan ku soo qaadaneyno wararka natiijada doorashada Maraykanka.
Posted at 3:45 9 Nov 2016
Clinton oo la saadaalinayo inay ku guulaysato codka gobolka Virginia
Warbaahinta Maraykanka ayaa ku waramaysa in la saadaalinayo in Clinton ku guulaysato codka gobolka Virginia.
Telefishanka ABC New ayaa isna sidoo kale saadaalinaya in Clinton ku guulaysanayso gobolkan muhiimka ah ee kuwa lagu kala baxo ka midka ah.
Posted at 3:36 9 Nov 2016
Warbaahinta Shiinaha oo dhaliishay doorashada Maraykanka
Warbaahinta dowladda ee Shiinaha ayaa baahiyey faallooyin ay ku dhaliilayaan doorashada Maraykanka. Wargeyska afka dowladda ku hadla ee People's Daily ayaa ku waramay in doorashooyin "qalalaase wataa" ka qabsoomeen dalka Maraykanka oo ay ugu cod dheeryihiin "dad aan loola yaabo oo aan ilbax ahayni" taas oo muujinaysa in Maraykanku yahay dal "dimuqraadiyadiisu dhantaalantahay".
Dhanka kale Wargeyska Global Times ayaa sheegay in "hamiladii Maraykanka ee ahayd inuu siyaasadda dunida hogaan u noqdaa" ay dhammaatay. isla markaana ay tahay in dunidu arrintaa siday tahay u fahamto".
Posted at 3:25 9 Nov 2016
Trump iyo kooxdiisa oo si dhaw ula socda natiijada
Donald Trump ayaa ku sugan magaalada New York halkaasi oo uu si dhaw ula socda natiijooyinka codbixinta doorashada.
Waxaa sawirradan ku wehliyo qoyskiisa iyo kooxdiisa ololaha doorashada kula jirtay.
Posted at 3:04 9 Nov 2016
Suuqyada caalamka ayaa jawaab ka bixiyay natiijooyinka hordhaca ah
Iyadoo ay soo baxayaan natiijooyinka hordhaca ah ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada caalamka baaxaadag. Qiimaha lacagta dalka Mexico ee Mexico Pesa ayaa hoos u dhacday, halka lacagta dalka Japan ee Yen ay iyaduna kor u kacday.
Posted at 2:56 9 Nov 2016
Louisiana Waxaa ku guuleystay Trump
Louisiana waxay u codeysay xisbiga Jamhuuriga afartii doorasho ee u dambeysay, balse gobolkaasi ayaa taageeray Bill Clinton sanadihii 1992 iyo 1996.
Posted at 2:06 9 Nov 2016
Lix gobol oo kale ayuu Trump ku guuleystay Clinton-na hal gobol
Clinton waxaa la saadaalinyaa inay ku guuleysato gobolka ay ka soo jeedo ee New York, balse goboladaTexas, Kansas, North Dakota, South Dakota iyo Wyoming waxay raaceen Trump sida ay ku warantay ABC News.
Goboladan markii horaba waxaa loo badinayay dhinaca Trump
Posted at 1:57 9 Nov 2016
Ilaa haatan lama filaan ma soo bixin
Trump ayaa la moodaa inuu guulo ka soo hooyay gobollada xisbiga Jamhuuriga aadka looga taageero ee Indiana, Alabama, Kentucky, West Virginia, Oklahama, Tennessee iyo South Carolina,
Clinton ayaa iyadana ka saadaalinayaa in ay ku guulaysato gobollada xisbiga Dimuqraadigu xoogga ku leeyahay ee ay ka midka yihiin Vermont, Delaware, Maryland, Massachusetts iyo New Jersey.
Waxa la soo gabagabeeyey codbixintii ka socotay laba gobol oo waawayn oo kala ah North Carolina oo leh 15 ergo codeed iyo Ohio oo leh 18 ergo codeed laakiin weli saadaashoodii may soo bixin.
North Carolina ayaa lagu tiriyaa inay xuddun u tahay kala qaybsanaanta Maraykanka ayaa waxa ku soo biiray dad aan badnayn oo dhawaan u soo guuray una jandheedha xaga Dimuqraadiga, waxase kaloo jira in caddaanka saboolka ah ee ku nool dhulka miyiga ah iyo tuulooyinku ay taageerayaan Trump.
Gobolka Ohio ayaa ah mid natiijada codbixintiisa aad loo sugayo waana gobolka miisaanka rajaxa oo inta badan musharaxa laga taageero ayaa guulaysan jiray ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida wixii ka dambeeyay mar qudha mooyee.
Waxa sidoo kale indhaha lagu hayaa Virginia, oo natiijada hordhaca ah ee soo baxaysaa tilmaamayso in tartar aad u adagi dhex marayo labada dhinac. Waxaana jirta in dadka codka bixiyey ku kala qaybsanmeen sabano la xidhiidha isirka, heerka tacliinta iyo labd amma dheddig ka qofku uu yahay.
Posted at 1:43 9 Nov 2016
Rubio oo ahaa senatarka Falorida ayaa dib loo doortay
Marco Rubio, oo ka mid ahaa dadkii ugu cadcadaa musharraxnimada Jamhuuriga ayaa ku guuleystay tartanka xubinnimada Senetka Florida
Posted at 1:35 9 Nov 2016
Alabama waxaa loo badinayaa inay taagerto Trump
Shabakadda wararka ee ABC News waxay saadaalineysaa in Donald Trump uu ku guuleystay gobolka dhaqan ahaan Jamhuuriga taageri jiray ee ku yaal Koonfurta Maraykanka
Posted at 1:31 9 Nov 2016
Trump ayaa la saadaalinayaa inuu ku guuleystay gobolka Tennessee
Gobolka Tennessee ayaa Jamhuuriga u codeynayay tan iyo markii uu dhammaaday xukunkii Clinton.
Posted at 1:27 9 Nov 2016
South Carolina waxay taageertay Trump
Gobolka South Carolina, oo sagaalkii doorasho ee la soo dhaafay u codeyay xisbiga Jamhuuriga balse hadda loo heystay in tartan xooggan uu ka dhici doono ayaa waxaa la saadaalinyaa in uu ku guuleystay Donald Trump.
Posted at 0:54 9 Nov 2016
Clinton daal ayaa ka muuqday Trump-na 'kalsooni darro'
Clinton iyo Trump codadkooda ayay mar sii horreysay dhiibtaan. Clinton waxaa ka muuqday daal Trump-na kalasooni darro.
Posted at 0:28 9 Nov 2016
Natiijada hordhaca ah
Telefishanka Maraykanka ah ee ABC ayaa natiijadan saadaalinaya:
Kentucky ayaa la saadaalinayaa inuu u codeeyo Trump. Isku hallaynta ay Jamhuurigu ku qabaan gobolka ayaan waxba iska bedelin marar dhawr ah oo musharax Dimuqraadiga ah oo ka soo jeeda gobollada koonfureed tartamayey mooyaane. Waxaana ka mid ahaa Jimmy Carter oo tartamayey 1976 iyo Bill Clinton oo tartamayey 1992.
Vermont ayaa la saadaalinayaa in uu u codeeyo Clinton. Obama oo ahaa Dimuqraadi wuxu ka helay 66% sannadkii 2012.
Indiana ayaa la saadaalinayaa inuu u codeeyo Trump. Gobolkan waxa lagu yaqaan inuu yahay mid u go'ay xisbiga Jamhuuriga in kastoo Barrack Obama aqlabiyad aan sidaa u buurrayn uu ka helay sannadkii 2008.
Posted at 0:02 9 Nov 2016
Clinton oo gaartay hotel ku yaalla New York
Weriye ka tirsan BBC-da Regan Morris ayaa hadda aragtay Hillary Clinton oo sii galeyso hotel ku yaal New York oo ay joogi doonto caawa ilaa iyo inta lagu dhawaaqayo natiijada.
Wuxuu u dhawyahay dhismaha Trump Tower. Booliska ayaa xiray aagaasi.
Posted at 23:52 8 Nov 2016
Degdeg: Dad lagu dhaawacay goob codbixineed agteeda
Goob codbixineed oo ku taal magaalada Azusa ee gobolka California ayaa la xidhay ka dib markii rasaas laga riday agteeda.
CNN ayaa ku waramaysa in laba qof halkaa lagu dhaawacay.
Sarkaal ka tirsan qaybta booliska Azusa oo la yidhaa Jerry Willison ayaa sheegay in toogashadu dhacday labadii duhurnimo (2:00) markay ahayd saacadda Maraykanku
Isagoo la hadlayey wargeyska Loss Angeles Times ayaa wuxu yidhi sarkaalkaasi "xaaladdu waa mid adag oo faraha ka bixi karta hadii aan wax laga qaban".
Posted at 23:24 8 Nov 2016
Mushararax Ilhaan Cumar oo dareenkeeda ka warrantay ka dib markii ay codeysay
Ilhaan Cumar waxay u tartameysaa aqalka wakiilada gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Markii ay codeysay ayay u warrantay weriyaha BBC-da Maraykanka Mahamed Haji Hussien
Daawo: Gabar Soomaaliyeed oo u tartameysa aqalka wakiilada Minnnesota
Posted at 23:23 8 Nov 2016
Daawo: Dareenka qaar ka mid ah Soomaalidii codeysay
Halkan ka daawo qaar ka mid ah Soomaalida Maraykanka ee codeysay oo ka warramaya dareenkooda.
Daawo: Qaar ka mid ah Soomaalida codeysay
Posted at 23:11 8 Nov 2016
Waayihii ay soo mareen Clinton iyo Trump
Halkan ka daawo sawirada nolosha ay soo mareen musharrixiinta madaxtinnimada Maraykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump.
Posted at 23:05 8 Nov 2016
Website laga leeyahay dalka kenya ayaa soo ururin doona isla markaana kaydin doona falal dambiyeedka ka dhaca doorashada dalka Maraykanka ee ay ka midka yihiin caga juglayntu.
Halkan ka akhriso faahfaahinta warkaasi